Tombontsoam-bahoaka : Laharam-pahamehan’ny fitondrana -
AccueilRaharaham-pirenenaTombontsoam-bahoaka : Laharam-pahamehan’ny fitondrana
12/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fantatra avokoa ireo olana izay sedrain’ny faritra tsirairay hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, na eo amin’ny lafin’ny fahasalamana izany, fampianarana, ny tsy fandriam-pahalemana, ary ny fahasahiranana, ny fiainana any ambanivohitra hoy ny Filoha nandritra ny fandaharana fotoam-bita. Noho izany dia nambaran’ny Filoham-pirenena manoloana ireo olana maro izay sedraina dia azo atao tsara tokoa ny mamaha ny olana, saingy misy ny tsy azo tanterahina anatin’ ny indray mipi-maso, tahaka izany ohatra izao ny fisondrotry ny vidin-tsolika “ tsy azo ihodivirana ny fiakaran’ny vidin’ ny solika, amin’ izao fotoana izao, dia efa misy ny fifampiraharahana amin’ ireo kaompanian-tsolika amin’ny fampiakarana mba atao tsikelikely. Ankilany anefa tsy azo atao ny manome vola ireo manan-karena dia ny kaompania izany amin’ny alalan’ny fanampiana avy amin’ ny fanjakana” hoy hatrany ny Filoha. Izany fanapahan-kevitra izany ihany koa hoy ny Filoha izay ilana fandraisana andraikitra goavana, satria raha ny fanapahan-kevitry ny mpitantana tany aloha izao dia fandaniam-bola mihoa-pampana ho an’ny firenena izany.
Manana fomba fijery vaovao rahateo ny filoham-pirenena ankehitriny: izay revolisionera , dia eo ny fanenana ny fandaniam-bolan’ny fanjakana amin’ny alalan’ity fanampiana, toa ny an’ ny JIRAMA sy ny kaompanian-tsolika, izany dia mba ahafahana manatanteraka fanamboarana fotodrafitrasa maharitra ho an’ny fampandrosoana ny firenena.
Mikasika ny fiakaran’ny vidin’entana kosa indray, dia nanambara ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa efa napetraka ny Task Force, izay hiady amin’ny fiakaran’ny vidin’ entana io, izy ireo rahateo izay efa eo ampanatontosana ny asany. Ankehitriny tokoa mantsy dia fantatra fa misy ny olona izay manao ampihimamba ary mitazoka ireo vokatra izay tokony hivoaka ao aminy, antony nampiakatra ny vidin’ny entana ilaina andavanandro. Fomba fanao izay tsy azo ekena, ary hiadivan’ ny governemanta tantanin’ny governemanta Rajaonarimampianina. Tany ampamaranana ny fandaharana dia tsy nohadinoin’ ny Filoham-pirenena no nilaza fa anatin’ ny laharam-pahamehan’ny governemanta amin’izao ny lafin’ny fanamboaran-dalana. Amin’izao dia efa tanterahina ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha- 43,6 ary ny lalam-pirenena faha-5 A. Ny fahavitan’ny lalana rahateo dia antoka iray ho an’ny fampandrosoana eny ifotony.
“Mila vina maharitra ny fanarenana ny firenena. Tsy hijanona antenantenany isika fa hanohy , ary hanatratra ny tanjona faratampony. Ny hampitraka an’i Madagasikara, mba hahitan’ny Malagasy isan-tokantrano ny anjara masoandrony. Izany no antony lehibe nasahiako ...Tohiny